Alakamisy, May 8, 2014 Alakamisy 6, 2014 Douglas Karr
piwik dia misokatra Analytics sehatra ampiasain'ny olona, ​​orinasa ary governemanta manerantany. Miaraka amin'i Piwik, ho anao foana ny angonao. Piwik dia manolotra karazana fiasa matanjaka ao anatin'izany ny tatitra momba ny statistika mahazatra: teny lakile ambony sy motera fikarohana, tranokala, URL pejy ambony, lohatenin'ny pejy, firenena mpampiasa, mpamatsy, rafitra fiasa, fizarana fivarotana fitetezam-paritra, vahaolana amin'ny efijery, birao VS finday, firotsahana (fotoana eo amin'ny toerana , pejy isaky ny fitsidihana, fitsidihana miverimberina), fampielezan-kevitra ambony, fanovana manokana, pejy fidirana / fivoahana ambony, fisintomana rakitra ary maro hafa, voasokajy ho efatra lehibe Analytics sokajy tatitra - mpitsidika, hetsika, mpanondro, tanjona / e-varotra (tatitra 30+).
Piwik koa dia manolotra serivisy matihanina sy vahaolana fampiantranoana antsoina Piwik Pro izay misy ny ohatra asehonao amin'ny Piwik izay tantanana sy tantanana ao anaty rahona. Ity misy tapakila mpiara-miasa aminy 30% OFF famandrihana 6 volana ho an'ny drafitra Piwik Cloud rehetra.
Fampisehoana Piwik Web Analytics
Fanavaozana ny data amin'ny fotoana tena izy - Jereo ny fizotran'ny fitsidihana ny tranonkalanao. Makà fomba fijery amin'ny antsipirihany momba ireo mpitsidika anao, pejy izay notsidihin'izy ireo ary tanjona naterak'izy ireo.
Dashboard an'ny tranonkala rehetra - Ny fomba tsara indrindra hahazoana topimaso momba ny zava-mitranga amin'ny tranokalanao rehetra indray mandeha.
Fanaraha-maso ny fanovana tanjona - Araho ny variables manokana ary fantaro raha mahafeno ny tanjon'ny orinasa ankehitriny ianao.
Geolocation - Tadiavo ireo mpitsidika anao mba hahitana marina ny Tany, ny Faritra, ny Tanàna, ny Fikambanana. Jereo ny antontan'isa ho an'ny mpitsidika amin'ny Sarintany Iraisam-pirenena iray araky ny firenena, Faritra, Tanàna. Jereo ireo mpitsidika anao farany amin'ny fotoana tena izy.
Tetezamita pejy - Jereo izay nataon'ny mpitsidika taloha, ary aorian'ny fijerena pejy manokana.
Overlay pejy - Asehoy mivantana ny antontan'isa eo an-tampon'ny tranonkalanao miaraka amin'ny overlay marani-tsaina.
Tatitra haingam-pandeha sy haingam-pejy - Manara-maso ny hafainganan'ny haingana ny tranokalanao manolotra atiny ho an'ireo mpitsidika anao.
Araho ny fifandraisan'ny mpampiasa - Fanarahana mandeha ho azy ny fisintomana rakitra, tsindrio eo rohy tranonkala ivelany, fanaraha-maso tsy voatery an'ny 404 pejy
Tsy misy fetran'ny angona - Afaka mitazona ny angon-drakitrao rehetra ianao, tsy misy fetra fitahirizana, mandrakizay!
Tags: loharano misokatrafanadihadiana loharano misokatraanalytics amin'ny loharano misokatrapiwikpiwik proMalagasy Analytics
Ahoana ny fomba fananganana fantsona fivarotana haino aman-jery sosialy
Manara-maso ROI Marketing marketing ho an'ny Dummies